Taxi be - UCTU Anio vao tena miasa
Na nisy aza ny filazana fa manomboka omaly no miverina miasa ireo fiara fitateram-bahoaka dia vitsy ireo nanatanteraka izany amin` ireo fiara fitateram-bahoaka miasa eto an-drenivohitra.
Nampijanona ireo mpandeha hamonjy ireo toeram-piasana izay fahavitsian'ny taxibe niasa izay. Maro ireo mpiasa no nahatsiaro fa very fotoana kanefa maro ireo zavatra henjehina any am-piasana kanefa mitombo ny harerahana. Raha ny tatitry ny filohan` ny UCTU omaly dia maro ireo fiara miasa eto an-drenivohitra no tsy niasa. Antony mbola maro izy ireo no tsy nahavita ny famendrahana fanafody natao tamin` ny fiara, izay fepetra takian` ny fitondram-panjakana ho fiarovana ny fahasalaman` ny mpandeha. Noho izany, anio vao tena miverina miasa avokoa ireo fiara fitateram-bahoaka an-drenivohitra.